Croquettes Legacy Legacy | Cuntada Nutri
NutriDiet | | Cunnooyinka caafimaadka leh
Croquettes had iyo jeer waa mid ka mid ah kuwa cuntada fudud ee aadan seegi karin. Sababtoo ah marwalba waa guul oo aqlabiyad badan ayaa jecel. Waxay qirayaan dhammaan noocyada maaddooyinka laakiin maanta, waxaan ku sharadnaynaa Dhaxalka Iberia qaab ham tayo sare leh. Taasi waxay ku dareysaa faa'iidooyin badan oo laga fiirsado.
Marka hadaan wax isla dhigno ham iyo croquettes, Waxaan miiska saarnaan doonaa wax ka badan isku darka walxaha qarxa. Sababtoo ah duuf sidan oo kale ah ayaan nafteenna u siin karnaa. Ma rabtaa inaad ku guuleysato martidaada hortooda? Markaa ha ka waaban inaad raacdo talaabooyinka aan halkan kugu tusayno.
1 Waxyaabaha ay ka kooban tahay Iberian dhaxalka croquettes ee 4 qof
3 Faa'iidooyinka ham dhaxalka Iberia
Waxyaabaha ay ka kooban tahay Iberian dhaxalka croquettes ee 4 qof
50 garaam oo saliid saytuun ah (in kastoo aad u isticmaali karto subag hadaad sidaa ka hesho)
75 garaam oo bur ah
250 garaam oo habar Iberiyaan ah
1 litir oo caano ah
Burcadka rootiga iyo daqiiqda si loogu daboolo suxuunta
ka Ham croquette waxay leeyihiin diyaar garow aad u fudud. Marka hore, waxaan digsi saaraynaa dabka saliida ama subagga iyadoo kuxiran waxaad go'aansatay. Waa inaad saliida wax yar kululeeysid ama aad sugtid inta subagga gebi ahaanba dhalaalay. Waqtigaan, waxaad ku dari doontaa basasha aad u baahan tahay inaad si aad ah u jarjareyso. Waanu ugaarsi doonaynaa, markaa waa inaan qasnaa daqiiqado.
Markay basasha hesho taabashadaas hufan, waa waqtigii lagu dari lahaa Xaamiga Iberiyaanka, taas oo aan u kala jarjari doono qaybo yaryar. Haddii aad doorbideyso badeecad kale oo la mid ah, waa inaad ogaataa taas Dhaxalka Iberia ee maxkamadda Ingiriiska waxay leedahay noocyo iyo dhadhan gaar ah oo ay tahay inaad udgoonto. Laakiin waxaa laga yaabaa in loogu talagalay cuntooyinka mustaqbalka iyo menus. Dhanka kale, waxaan ku haysan doonnaa basasha iyo ham duxda oo aan ku dari doonno bur oo aan u karineyno ilaa 6 daqiiqo. Waxa aan u baahanahay waa in burka uu lumiyo dhadhankiisu, laakiin wuxuu ku darayaa joogteynta natiijada.
Daqiiqadahaas kadib, waxaa la joogaa waqtigii lagu dari lahaa caanaha oo walaaq waqti kasta. Waxaan ogaaneynaa sida ay uumi baxayaan wax yar ayaanna ku dari doonnaa. Marka si fiican u walaaqaya, waxaan ka hortageynaa buruqyada inay sameysmaan. Markaynu leenahay cajiin aan aad u dheg dhegin laakiin aan gebi ahaanba dabacsanayn, waxaa la joogaa waqtigii la dhadhamin lahaa milixda, lagu dari lahaa lowska, walaaq mar kale oo dabka dami. Waxaan ku shubi doonaa cajiinka ilo sifiican u faafiyey oo aan u ogolaaneyno inuu qaboojiyo. Markay qabowdo, waxaan geynaa qaboojiyaha.
Waad ka tagi kartaa iyaga dhowr saacadood ama, diyaari tan habeenki oo sug ilaa maalinta xigta. Si aan u dhammeyno saxanka, waa inaan qaadanaa qaybo ka mid ah cajiinka oo aan kubad kula sameysanaa iyaga ama, waxaan siineynaa qaab dherer ah, sida aad doorbideyso Markaad haysato, waxaad uga sii gudbeysaa bur, ukumo la tumay iyo jajabkii rootiga. Waxaad dhigeysaa digsi saliid kulul leh waxaana lagu shiilaa qaybo yaryar, si natiijada ka soo baxdaa ay u noqoto mid togan. Hadda waxaad ku raaxeysan kartaa dhadhan gaar ah!
Faa'iidooyinka ham dhaxalka Iberia
El Dhaxalka Iberia Hipercor waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad tijaabiso alaabo kale oo tayo sare leh. Laakiin maanta waxaan diiradda saareynaa ham, oo ah shey muhiim u ah nolosheena. Xaaladdan oo kale, oo lagu daro mid ka mid ah suxuunta ama heerka sare ee 'tapas par', waxay dib u abuuraan mid ka mid ah cuntooyinka macaan. Laakiin maxay yihiin faa'iidooyinkiisa weyn?
Waa in la yiraahdaa dufanka doofaarka Iberia waxay leeyihiin oleic acid ka badan kuwa kale. Tani waxay ka dhigeysaa natiijada hamagaaga mid aad u badan faa'iido u leh kolestaroolka. Samaynta, haddaba, in waxa wanaagsanu kaco. La cuno dhowr jeer usbuucii ama xitaa seddex iyo tiro yar, waa gebi ahaanba waxtar caafimaadkeena. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay borotiinno iyadoo aan la ilaawin fiitamiinnada B1, B6, B12 iyo E. Macdanta ayaa sidoo kale ku jira hiddaha Iberiyaanka halkaas oo aan ku soo bandhigno birta iyo naxaasta ama kaalshiyamka iyo zinc. Wali miyaad isweydiineysaa inaad u soo bandhigto cuntadaada iyo in kale?
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Nafaqeyn » Cunnooyinka caafimaadka leh » Croquettes dhaxalka Iberia
Cunnooyinka kalooriga oo kayar 900 oo kalori